Kordhinta faylka. Maxay yihiin iyo sida loo arko kordhinta qarsoon | War gadget
Kordhinta faylka. Maxay yihiin iyo sida loo arko kordhinta qarsoon
LFaylasha aan ku haysanno kumbuyuutarkeena waxaa lagu tusi karaa shaashadda laba siyaabood, tusaale ahaan, haddii aad leedahay a faylka isku buuqsan loo yaqaan "file32" waxaad ku arki kartaa kombuyuutarkaaga "file32" ama laga yaabee "file32.zip" ama "file32.rar". Haddii aad kaliya aragto qaybta magaca "file32" kombuyuutarkaagu wuxuu hayaa kordhinta qarsoon, sida caadiga ah waxay u dhacdaa si caadi ah Windows XP (Ma garanayo sida ay ku imaan doonaan Vista), hadda, haddaad aragto faylka leh dhammaadka ".zip" ama ".rar" (waxay kaloo noqon kartaa kuwa kale oo badan sida ".arc" ama ".exe», tusaale ahaan) markaa kombuyuutarkaagu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto kordhinta faylka.
AHadda waad ogaan kartaa haddii fidinta faylka la muujiyey ama lagu qariyey kombuyuutarkaaga si fudud adoo samaynaya tijaabadii hore, laakiin maxay yihiin kordhintu maxayna u yihiin?
Waa maxay kordhinta faylka?
Luqadda iskudhafka ah waxaan dhihi karnaa kordhinta feylku waa eray caadi ahaan, had iyo jeer, maahan mid ka kooban seddex xaraf isla markaana wuxuu udhaxeeyaa magaca faylka mudo. Tusaalooyinka kordhinta qaarkood waa: .zip, .pps, .exe, .pdf, .jpg, .avi, .3gp, .pando, .png, .bmp, .mov, .html, iwm.
Maxay u yihiin
Nidaamyada hawlgalka sida Windows waxay u adeegsadaan kordhin si ay u aqoonsadaan qaabka feylka. Taasi waa, haddii aad aragto feyl la yiraahdo "uncompressed.rar" waad ogtahay inay tahay a faylka isku buuqsan maxaa yeelay, in kasta oo magaceedu si kale u yiraahdo, waxay leedahay kordhin ".rar" ah oo u dhiganta mid ka mid ah noocyada kordhinta ee ay isticmaalaan faylasha la isku daray.
AIn kasta oo kordhintu aysan muuqan, nidaamka qalliinka ayaa aqrin doona maadaama ay wali ku xiran yihiin feylka xitaa haddii aadan arkin. Sidan oo kale kumbuyuutarku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku qabato hawlo qaarkood ama kuwa kale faylkaas iyadoo ku xiran hadba kordhintiisa.
PWaxaad isweydiin kartaa maxaan u doonayaa inaan arko kordhinta faylka haddii kumbuyuutarku hore u ogaa sida loo maareeyo inkasta oo aanan arkin? Waa hagaag, dhowr sababood awgood:
Primero maxaa yeelay habkaas ayaad awood badan ku yeelan doontaa faylasha kumbuyuutarkaaga oo aad hagaajineysaa seguridad isaga.
Haddii, tusaale ahaan, aad ka soo dejiso sawir internetka oo la yiraahdo "foto.jpg.exe" oo aad leedahay kordhin siyaado ah, waxaad arki doontaa oo keliya "sawir.jpg" maxaa yeelay si sax ah xaaladdan oo kale kordhinta waa ".exe" oo u dhiganta faylka la fulin karo. Ha qasan, xusuusnow taas kordhinta waxay aadeysaa dhamaadka faylka. Haddii feylka loogu yeeri lahaa «fotografia.jpg» wuxuu noqon lahaa sawir leh «.jpg» kordhin, laakiin maadaama feylka loo yaqaan «fotografia.jpg.exe» kordhinta waa «.exe» sidaas darteedna waa barnaamij qof ayaa rabay inuu ku dhuunto gadaasha muuqaalka sawirka.
Tani waxay macnaheedu noqon kartaa in barnaamijka laga hadlayo uu yahay a virus oo waxay doonayeen inay ku soo dhex dhuuntaan. Sikastaba, xitaa hadii aad leedahay kordhinta qarsoon, nidaamka qalliinka wuxuu aqoonsan lahaa inuu yahay feyl la fulin karo sidaas darteedna wuxuu ku soo bandhigi lahaa shaashadda astaan ee barnaamijka oo aan la mid ah sawirka. Laakiin haddii aadan dheg u dhigin oo aadan fahmin faahfaahintaas, waxaad rakibi kartaa fayraska adigoo u maleynaya inaad fureyso sawir.
Labaad maxaa yeelay haddii aad raacdo mid ka mid ah casharrada aad ka heli karto halkan VinagreAssino.com waxaad arki doontaa inaan sida caadiga ah tixraaco feylasha leh magacooda iyo kordhintooda. Sidan ayaa ay u fududahay raac buugaagta sidoo kale way fiicantahay inaad la qabsato, hadaadan hore u jirin, inaad awood badan ku yeelato waxaad kombuyutarkaaga ku samaynayso.
SHaddii aadan arki karin kordhinta faylasha (ama faylasha) kumbuyuutarkaaga oo aad rabto inaad aragto, tani waa waxa lagaa doonayo inaad sameyso si ay uga muuqdaan shaashadda.
1aad) Waxaan u baahanahay inaan furno daaqad kasta oo daaqad sahamisa. Hab dhakhso leh oo loo sameeyo adigoo laba jeer gujinaya "Kombiyuutarkayga". Sawirka soo socda waxaad ku arki kartaa saddexda goobood ee aad ka heli karto astaanta "My Computer". Liistada Bilowga, dusha desktop-ka, ama Daaqadda Degdegga ah ee loo yaqaan 'taskbar'.
2aad) Markuu furmo daaqadda loo yaqaan "My Computer", dhagsii dusha daaqadda halka ay ku qoran tahay "Qalabka". Ka dibna menu-ka hoos-u-furan ee furmaya, dhagsii "Faylka xulashooyinka ..." oo ku yaal xagga hoose ee liiskaas.
3aad) Daaqada "Folder Options" ayaa furi doonta, oo ay ku jiraan saddex tab. Dhagsii tabka "Muuqaalka" ka dibna hoos ugu laabo dhinac dhinac ah (fiiri sawirka) aagga loo yaqaan "Dejinta horumarsan" illaa aad ka aragto ikhtiyaarka "Qari kordhinta faylasha noocyada feyl ee la yaqaan" taasi waa la calaamadeyn doonaa. Waxa ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad calaamadeyso sanduuqaas si aad u aragto kordhinta qarsoon. Markaad dhamayso, dhagsii badhanka "Codso dhammaan fayllada" ee ku yaal xagga sare ee aagga loo yaqaan "Aragtida muuqaalka". Sidan oo kale waxaan ka dhigi doonnaa kordhinta feylasha oo dhan kuwo ka muuqda dhammaan fayl. Sawirka hoose, wax walba waxaa lagu muujiyey inay u noqdaan tixraac.
Marka xigta, daaqad loo yaqaan "Aragtida galka" ayaa furmi doonta taas oo nidaamka qalliinka uu ku weydiinayo haddii aad rabto inaad ku xirto dhammaan fayllada kombiyuutarka si ay ula jaan qaadaan goobaha aad codsatay. Guji "Haa" oo sii wad.
4aad) Markaa dhagsii batoonka "Apply" ee ku yaal geeska midig ee hoose ee daaqadda "Folder Options" si isbedelada la sameeyay ay u badbaadaan.
Ugu dambeyntii, guji "OK" si aad u xirto daaqadda.
AHadda kordhinta faylka waa la arki karaa waxaadna awood u yeelan doontaa inaad xakameyso iyaga. Ugu dambeyntiina, akhri labadan talobixin si aad uga fogaato dhibaatooyinka:
Hadda markii aad bedesho magaca fayl kasta waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa ha badalin kordhinta inaad faylka sidato. Nidaamka qalliinka ayaa kuu digi doona haddii aad isku daydo inaad sameyso, laakiin haddii aad si qalad ah u sameyso, waxba ma dhacaan, dib u magacaw adoo dhigaya kordhinta u dhiganta dhamaadka.
Ha u maleynin inaad awoodid ka beddelo hal qaab oo qaab kale kaliya adoo badalaya kordhinta faylka. Haddii aad haysato fiidiyoow la yiraahdo "video.avi", ha u maleynin inaad ku magacawdo "video.wmv" inaad horay ugu beddeshay qaabka Windows Media Video (wmv). Faylka ayaa sii ahaan doona fiidyow qaab "AVI" ah waxa kaliya ee aad ku guuleysan doontana waa in nidaamka qalliinka uusan ku furi doonin arjiga u dhigma sidaas darteedna ma awoodi doontid inaad daawato.
BWaa hagaag, intaas oo dhan ayaa la xiriirta kordhinta iyo sababta ay faa'iido u leedahay inaan aragno iyaga oo aannaan qarin. Maqaal kale waxaan ku arki doonaa kuwan oo ah kordhinta ugu caansan (zip, avi, bmp, ...), qaababka ay u taagan yihiin (iskudir, fiidiyow, muuqaal, ...) iyo waxa programas waxaan u baahanahay inaan mid walba isticmaalno. Ilaa markaas salaamaha canabka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Kordhinta faylka. Maxay yihiin iyo sida loo arko kordhinta qarsoon
57 faallooyin, ka tag taada
Ma ogtahay khiyaano kasta oo aad ugu magacdareyso faylasha kordhinta qarsoon adoo sidoo kale badalaya kordhinta. Waxaan u muuqdaa inaan ku akhriyay meel ay ahayd in lagu lifaaqo calaamadaha xigashada. Waan sii wadi doonaa
Ku jawaab rzapatav
Khamri Dila dijo
Oo maxaad u dooneysaa inaad sidoo kale u bedesho kordhinta?
Ka jawaab Khamriga Dila
Waxaan rabaa inaan barto waxyaabo cusub
Jawaab ANA LUISA
Waxaan raacay dhamaan talaabooyinka feylashana ma muuqdaan ... waa sawiro
Maxaan sameyn karaa? waana ubaahanahay iyaga
Hagaag, malahan fikrad Miguel, aragti ahaan waa inaad aragtaa.
Waxaan sameeyay tillaabooyinkii aad iweydiisay khal khal ...
hadana waan rakibayaa hadaan guuleysto, waan kuu soo qorayaa haddii kalese waan ku arki doonnaa Kuidense ...
hello khalkeyga dhibaatadaydu waa dirista soo socota si aan u qaabeeyo kumbuyuutarkeyga waxaanan rakibay barnaamijyo dhowr ah laakiin xilligan aan soo dejinayo daaqadaha windows live messenger ma sii wado barnaamijka fariinta ma ahan codsi win32 ansax ah hadaad xoogaa i hagto
Oo khal dijo
Waxa ugu horeeya waa inaad fiiriso kordhinta aad haysato, ma ogaan doontaa sida aysan ahayn? Markaa haddii aadan arkin wax la yaab leh, waa inay noqotaa .exe ama isku-duubni .rar ama .zip (badanaa), waxaa laga yaabaa inaad barnaamijka kala soo degsatay nidaam kale oo aad ku shaqeyso (waa dhif iyo naadir laakiin waa laga yaabaa). Isku day inaad soo dejiso oo haddii wax walboo hagaagaan, antivirus ayaa gudbaya haddii ay dhacdo in wixii hore aan la aaminin. Dhamaan wanaag.
Ka jawaab khamri
Waad salaaman tahay, fiiri, waxaan rabaa in aan ogaado sida aan u tirtiro feylasha, faylalka ama wax dheeri ah oo wax u dhimaya ama gaabinaya pc-ga iyo sida aan ku helo.
kordhinta aan u shaqeyneynin kombuyutarkayga.
Ku jawaab edith
Mahadsanid, mala-awaal, mahadsanid calooshood u shaqeystayaal!
Ku jawaab ultragon
WUXU I SOO ​​DIRAY FAYLAYAAL AUTOCAD AH (Kordhinta DWG), LAAKIIN KA DHEEREYSAN AYAA KEENAYA KORDHINTA EM .SIDEE U FURI KARAA?
Ku jawaab maribel
waad ku mahadsantahay kaalmadaada
Ku jawaab DoeRpA
WAA MUHIIM IN LAGU QAADO QAARKA Qarsoon
Jawaab LUIS MIGUEL
proteus ares Anigu kuma rakibi karo kombuyuutarkeyga markii aan dhammeeyo rakibidda barnaamijkan waxaan helayaa xayeysiis sheegaya in faylka licence.exe la la'yahay, sideen ku hagaajin karaa, maxaan sameyn karaa?
Waad mahadsantahay saaxiib, waad badbaadisay noloshayda, waxaan helay feylal badan oo aanan arki karin kordhinta, waxaan dhaqaajiyay waxyaabo gaar ah waxaanan u foorarsaday sidii qof yidhi runtii wuu i badbaadiyey, markale
SIDEE AYAAN KUGU ARKAA FILILYADA SQM Kordhinta waxaanan hayaa FAYLAYAAL AANAN ARKI KARIN KHORRIGAYGA MA GARAN KARO INAAN KA TIRO
Sida had iyo jeer heer sare ah, mahadsanid
Waad salaaman tahay
Maheli karo fiidiyowyo kumbuyuutarkeyga ah oo ay ii soo direen .3gp kordhin
maxaan ubaahanahay inaan sameeyo ?????????
Ku jawaab magda
AAD AAD U FIICAN qoraalka, waxaan raadinayaa macluumaad ku saabsan kordhinta maqalka iyo muuqaalka ugu wanaagsan ee lagu daabaco bogagga shabakadda, waan ku qanacsanahay hagitaankaaga g .grcs
Waad salaaman tahay, waad aragtay, waxaan isticmaalayaa antivirus iyo rootkits anti maxaa yeelay kumbuyuutarkaygu waa uu ku xanuunsan yahay websaydhada kalena waxay kugula talinayaan in aan la qarin faylasha iyo kordhinta si loo helo oo aan horey u haysto
Laakiin maxay layaabtay markaan koone kasta iyo galkasta aan ka helo boqolaal faylal qarsoon oo astaantoodu u muuqato mid aan sifiican u muuqan, waana iga yaabisaa maxaa yeelay inbadan ayaa ah waxyaabo aan tirtiray bilo kahor.
Su'aashaydu waxay tahay miyaan tirtiri karaa faylalkaan markale mise waxbaa dhici doona?
Ku jawaab m87
mahadsanid waad i badbaadisay
Ku jawaab kaiser
Sideen ku arki karaa emaylka leh WMV iyo AVI kordhinta.
Ku jawaab KIKE
Waad salaaman tihiin, dhibaatadaydu waxay tahay waxaan doonayay inaan ku daro xafiiska microsoft ee aan kala soo degay isagoo dhaawacan waxayna ii sheegeen inuu ku dari doono exe kordhinta waana sameeyay waana sameeyay laakiin wax furmay ma jiraan oo hada dhibaatadaas sababtay oo aan ex exe jirin feylku wuxuu furaa astaan ​​kasta oo barnaamijyada lama fuliyo waxaan rajeynayaa in caawimaaddaadu ay mahadsan tahay….
Ku jawaab si aad u hesho
khal khal ah ler. waad ku mahadsantahay macluumaadkaaga ... runti waa kuwo heer sare ah ... laakiin waad ogtahay ... waxaan doonayaa inaan sawir ugu diro emaylkeyga mana awoodo ... maxaan sameeyaa
mahadsanid youssssssssssssssssssssssss Angelica
Ku jawaab Angelica
INTAAS WANAAGSAN AYAY IGU DILEEN SHIR
GOOBTU WAA WANAAGSAN TAHAY WAA XOG BADAN
waad ku mahadsan tahay taas laakiin waxaa ka maqan kordhinta ugu caansan
Mahadsanid! Macluumaadku aad ayuu waxtar u lahaa, waxaan galay xk m qalad ayuu ku dhacay k
Ku jawaab Ritsuka
Waxaan hayaa cd sawirro ah oo aanan ka daawan karin wax aan ka ahayn kombuyuutarka, kordhinta sawirradu waa .oca ma waxaa jira daawade ama beddele ii oggolaanaya inaan ku duubo si aan uga daawado tv-ga
WAXAAN LEEYAHAY MUUQAAL JPG OO AAN U BAAHANAHAY INAAN UUGU JOOGO MAGAALO MAGACA MAGACA WAQTIGA ASALKA AH, EE AAN UGU JIRIN MUUQAAL AH IN AAN SAMEEYO SI MUUQAALKAYGA MAGAZIINKA LOOGUGU DAHABO , WAAN KUGU WAREEJIYAY PDF FILE ADOBE LAAKIIN MA GARO HADDII AY KUGU FILAN TAHAY MA II CAAWIN KARTAA FADLAN
Ku soo jawaab MONICA
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa ay tahay qoraal iyo sawir kordhin
fadlan waa deg deg
Ku jawaab NaTa
Aabe wuu adagyahay waan jeclahay isaga !!!!!!!!!
DEG DEG WAAN U BAAHANAHAY SAWIRKA IYO MUUQAALKA FAYLKA FIKRADA !!!!!! KIEN MA I CAAWIN KARAA ???????
IYO MUUQAAL !!!!!!!!!!!!!!!!! : l
Ma arki karo feylasha fiidiyowga ee leh kordhinta .exe ee WMP 11. Maxaad ku talineysaa?
Waa markii ugu horreysay ee aan la tashado boggaaga, oo ku saabsan sida loo arko kordhinta faylka aad ayey faa'iido u ahayd
Ku jawaab Gil
fadlan waxaan ubaahanahay caawimaad waxaan ubaahanahay inaan ka badalo feyl ka zip-ka una bedelo jpg
maxaa yeelay cidna ma daabacdo tan, waxayna u muuqataa inay mamnuuc tahay ma aanan fahmin
Ku jawaab waldo
Mahadsanid, wax badan ayey i caawisay. Better sharxay macquul ahayn in la helo.
Ku jawaab enzo
hello u fiirso dhibaatadaydu waxay tahay in aan haysto feyl leh db kordhin oo aanu ku furi doonin mid ka mid ah barnaamijyada aan haysto, sideen ku samayn karaa miyaan kala soo baxaa kantaroole? waad ku mahadsan tahay caawimaaddaada.
Ku jawaab silvi
Waxaan had iyo jeer ka helaa asxaabteyda, emayl leh faylal leh .wmv kordhin
Sideen ku ogaan karaa haddii aan ku furo furfurnaan xagga maskaxda ah, maxaa yeelay waxay igaga baqeen arrinta fayraska? Waxaan hayaa Avira, AVG iyo Avast antivirus
isku mid dijo
Hello Killer Canab,
Su’aashaydu waa tan; Waxaan hayaa barnaamij aan ku rakibo .exe, waan soo dajiyay laakiin kuma wadi karo kumbuyuutarkeyga kumana garanayo xitaa inuu yahay sida ay tahay, qaab ah winrar auto-executable file ah, hase yeeshe inta kale barnaamijyada si loo soo dajiyo sameeyo. Intaas waxaa sii dheer, isla barnaamijkan, waan arki karaa, raran karaa oo aan ku ordi karaa dhibaato la'aan kombuyuutarrada kale.
Muxuu yahay kordhinta sawirka, maqalka iyo muuqaalka?
Ku jawaab crhistopher
WAAN U BAAHANYAHAY CAAWIMO, si aan u qariyo waxa ku jira feylka ayaan tirtiray kordhintooda waxaana loo aqoonsaday inay yihiin feylal oo kaliya, hada ma xasuusto kordhintii ay lahaayeen, sideen ku ogaadaa kordhinta asalka ah ee feylashadayda
U jawaab Elizabeth
Super GOOD macluumaadku wax badan ayuu i caawiyay aad baad u mahadsan tahay much
Caawi pc-ga iga lumay .exe mana furi karo wax barnaamij exe ah oo iga caawiya porvafor
Ku jawaab Daxe
hello, wax aad ufiican oo aad sharaxdo waxaan ku weydiinayaa su'aal hadii aan ka soo dejisto fiidiyo ama filim ka soo baxa ares, intaad soo degsaneyso waxaan rabaa in aan arko inta yar ee aad soo degsatay ciyaaryahanka iss laftiisa si aan u arko bal in ay taasi tahay filimka ama fiidiyowga in aan raadinayey Ma jirtaa halista in fayras i qabto?
Aad baad u mahadsan tahay, waxaan ula jeedaa inaad runtii wax badan i caawisay. Horay waan u jahwareersanaa maxaa yeelay ma aanan aqoonin sida loo beddelo kordhinta faylasha iyo wixii la mid ah. Mahadsanid!(:
Ku jawaab Marie
Waxaan rabaa inaan ogaado sida aan email ugu diro iyo in qofkii hela uu si toos ah u furayo. Mahadsanid
WAAN U BAAHANYAHAY CAAWIN, SI DEG DEG AH!
Waxaan ubaahanahay qof i caawiya, waxaan hayaa dhowr sawir oo iso ah oo aan ku abuuro faylalka video_ts, laakiin waxaan kala soo degay aflaanta qaar qaab m2ts ah waxaanan aqriyay inaan badali karo qaabka u galaya xulashada galka, aragtida tabka oo ka saar sanduuqa si aan u qariyo faylka kordhinta ama wax sidaas ah, oo sifiican ayaan u gubi filimada laakiin hada filimadayda ISO ma rabaan inay qabsadaan DVD-kayga waxaanan mar kale saloolka ku sii dheereeyay kii loo kordhiyay walina waa sidii hore, qofkii i caawin kara wuxuu ahaan lahaa caawimaad weyn.
Salaan !! Waxaan rakibay ares waana isticmaalay, kombiyuutarkaygii waan damiyay marki aan markale shidana waxaan rabay inaan isticmaalo Ares waxayna ii sheegtaa inaysan aqoonsaneyn faylasha exe anigu ma aqaano sida loo xaliyo, ma awoodaa iga caawi sharraxaad fudud? inaan si fiican kuu fahmi karo, Aad ayaad ugu mahadsan tahay hore, Habsiin
Ma fahminoooooooooooooooooo ...
Subax wanaagsan! Markaan kaamarkayga xusuusta ku qoro taleefankayga oo aan ku xiro pc-ga si aan xogta u geliyo, wuxuu ii sheegaa inuu leeyahay exe kordhin, taleefankayguna iima akhriyo, maxaa sidan u dhacaya? Iyo kordhin intee le'eg ayay u baahan tahay inuu taleefankayga u akhriyo? Mahadsanid !!!
Waad salaaman tahay saaxiib, sidee tahay? Waxaan dhibaato ku qabaa in aanan ka qaadi karin sawirada feylasha filimka bd25 ama jajabyada ama wixii kale ee aan ogahay, ma iga caawin kartaa mahadsanid
Ku jawaab nicola
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Dhibaato ayaan qabaa, waxaan helay feyl leh jpf kordhin mana garanayo barnaamijka ama arjiga lagu furayo, ma ii sheegi kartaa arjiga uu u dhigmo, mahadsanid hore
Waxaan u maleynayay inay tani tahay wax laga naxo, waxaas oo dhan waxtar ma leh
Ku jawaab vassesa
Waan taageersanahay vanesa tani waa karaahiyo
Bixinta 44 XBox 360. Sida loogu guuleysto Xbox 360 bilaash ah MSN iyo Buddy
Meel kasta oo FM ah. Sida koonto looga sameysto Anywhere.FM si aad uga dhageysato muusikadaada meelkasta